ဤ AI-Created People အတုသည်သင့်အားအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုသလား။ - နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် - Teles Relay
ယခုလူများကိုရောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသည်။ Generated.Photos ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်သည်“ ထူးခြား။ စိတ်ပူစရာမရှိ” အတုအယောင်ဒေါ်လာ ၂.၉၉ နှင့်လူ ၁၀၀၀ ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲကဇာတ်ကောင်တွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုအတုလိုချင်တယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်ပါတယ် - သင်သည်ဤဓါတ်ပုံများကိုဤPersonDoesNotExist.comတွင်အခမဲ့ရနိုင်သည်။ လိုအပ်သကဲ့သို့သူတို့၏သဏ္ဌာန်ကိုညှိ; သူတို့ကိုအဟောင်းသို့မဟုတ်ငယ်ရွယ်စေသို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှု၏လူမျိုးရေးပါစေ။ အကယ်၍ သင်၏လူတုအတုကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိုပါက Rosebud ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုလုပ်နိုင်ပြီးစကားပြောဆိုနိုင်သည်။
ဒီအတုယူခံထားရသူတွေဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာစတင်ပေါ်ထွက်လာတယ်၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကိုမျက်နှာဖုံးအဖြစ်သုံးကြတယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမျက်နှာ ထောက်လှမ်းရေးအသိုင်းအဝိုင်းထိုးဖောက်ရန်အားထုတ်မှုအတွက်; Right- တောင်ပံဝါဒဖြန့် ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်များ၊ အွန်လိုင်း အနှောက်အယှက် အဘယ်သူသည်ဖော်ရွေမျက်နှာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ် trolls ။
ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာအတုများထုတ်လုပ်ရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် AI စနစ်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
AI စနစ်သည်မျက်နှာတစ်ခုစီကိုရှုပ်ထွေးသောသင်္ချာကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရှုမြင်နိုင်သည်။ တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မတူညီသောတန်ဖိုးများကိုရွေးချယ်ခြင်း - မျက်လုံးအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္determineာန်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်သူများကဲ့သို့ - ပုံတစ်ပုံလုံးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခြားအရည်အသွေးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံ၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးဖြတ်သည့်တန်ဖိုးများကိုပြောင်းလဲခြင်းအစားစနစ်သည်တန်ဖိုးများအားလုံးအတွက်အစနှင့်အဆုံးမှတ်များတည်ဆောက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးပုံနှစ်ပုံကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Generation ရန်ဘက်ဆိုင်ရာကွန်ယက်ဟုခေါ်သည့်အတုဥာဏ်သစ်တစ်ခုကြောင့်ဤပုံရိပ်တုအမျိုးအစားများကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကိုတကယ်လူများ၏ဓာတ်ပုံများဖြင့်ကျွေးသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုလေ့လာပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတက်ရန်ကြိုးစားသည်၊ အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကထိုဓာတ်ပုံများ၏မည်သည့်အတုသည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
နောက်ကျော -and ကနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုစစ်မှန်တဲ့အရာကနေပိုပြီးခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ ဒီပုံပြင်ရဲ့ပုံတူများကို The Times မှတီထွင်ခဲ့ပြီး GAN software ကိုကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်ကုမ္ပဏီ Nvidia မှလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တိုးတက်မှု၏အရှိန်အဟုန်ကိုထောက်ရှုခြင်းဖြင့်ဝေးလံသောဝေးလံသောအနာဂတ်ကိုစိတ်ကူး။ ရနိုင်သည်။ လူများအတုများ၏ပုံတူတစ်ခုတည်းသာမက၎င်းတို့စုဆောင်းထားသည့်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံး - မိတ်ဆွေအတုများနှင့်ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်သူတို့၏ခွေးအတုများနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော၊ သူတို့ရဲ့အတုကလေးတွေကိုကိုင်ပြီး။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မည်သူသည်ကွန်ပျူတာ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြရန်ပိုမိုခက်ခဲလာလိမ့်မည်။
“ ဒီနည်းပညာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမကောင်းဘူး၊ အဆိုပါ simsလူမှုရေးကွန်ယက်များ၏ခြယ်လှယ်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သူ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလေ့လာသည့်သုတေသီ Camille Françoisကပြောကြားသည်။ “ ဒါဟာနည်းပညာကဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးမှုပါ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ "
နည်းပညာမျက်နှာသည်အဓိကမျက်နှာအသွင်အပြင်များကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်နည်းပညာမျက်နှာဖုံးအတုများ၏တိုးတက်မှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်သင်၏မျက်နှာကို သုံး၍ သင်၏ဓာတ်ပုံဆော့ဖ်ဝဲအားထောင်နှင့်ချီသောဓါတ်ပုံများကိုစီစစ်ပြီးသင့်ကလေး၏ပုံများကိုသာပြသနိုင်သည်။ မျက်နှာဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်ကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ကအသုံးပြုပြီး၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ အမည်မသိရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်သူတို့၏အမည်တံဆိပ်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ရဲအရာရှိများ၏အထောက်အထားကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု Clearview AI ကို နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများမှအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မျှဝေထားသော - အများပြည်သူသုံးသန်းပေါင်းများစွာသောဓာတ်ပုံများကိုဝက်ဘ်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းမှအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးသည်။ နည်းပညာကစူပါပါဝါများကိုကတိပေးသည် - ကမ္ဘာကြီးကိုအရင်ကမဖြစ်နိုင်သည့်နည်းဖြင့်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။
သို့သော်အခြား AI စနစ်များကဲ့သို့ facial-recognition algorithms သည်မပြည့်စုံပါ။ သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုသည့်အချက်အလက်များ၏အခြေခံဘက်လိုက်မှုကြောင့်၎င်းစနစ်များသည်ဥပမာအားဖြင့်အရောင်ရှိလူများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်မသင့်တော်ပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဂူဂဲလ်မှတီထွင်ထားသောအစောပိုင်းပုံရိပ်ဖော်စနစ် တံဆိပ်ကပ် အနက်ရောင်လူနှစ် ဦး ကို“ Gorillas” ဟုခေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စနစ်သည်မှောင်မိုက်သောအသားအရေရှိသူများထက်ဂေါ်ရီလာ၏ဓါတ်ပုံများစွာကိုကျွေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်မျက်နှာ - အသိအမှတ်ပြုစနစ်၏မျက်လုံးများ - ကင်မရာများမှာရှိသည် မကောင်းဘူး မှောင်မိုက်သောအသားအရေရှိသည့်လူများကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊ အဲဒီကံမကောင်းတဲ့စံချိန်ဟာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ချိန်ညှိခဲ့ကြသည် အကောင်းဆုံးကိုပြသနိုင်ဖို့ အလင်းအရေခွံ၏မျက်နှာများ။ အကျိုးဆက်များပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလတွင်ဒက်ထရွိုက်မှလူမည်းတစ် ဦး အား Robert Williams အမည်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည် သူကျူးလွန်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ရာဇဝတ်မှု ဘာလို့လဲဆိုတော့မမှန်တဲ့မျက်နှာ - အသိအမှတ်ပြုမှုပွဲစဉ်၏။
အတုဥာဏ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ချို့ယွင်းချက်များရှိသည်။ လူသားများသည် AI စနစ်များကိုမည်သို့ပြုလုပ်သည်နှင့်မည်သည့်အချက်အလက်များကိုသူတို့ထိတွေ့သည်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် virtual assistants များကိုကြားနာရန်သင်ကြားပေးသောအသံများကိုရွေးချယ်ပြီးထိုစနစ်များကို ဦး ဆောင်သည် လူများနားလည်ရန်မဟုတ် အသံထွက်နှင့်။ လူတစ် ဦး ၏ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလူ့တရားသူကြီးများကချမှတ်ခဲ့သောယခင်တရားစီရင်ချက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသို့ကျွေးမွေးခြင်းဖြင့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးဆွဲသည် သူတို့အားတရားသူကြီးတွေရဲ့ဘက်လိုက်မှုအတွက်ဖုတ်။ ကွန်ပျူတာများကိုကြည့်ရှုရန်လေ့ကျင့်ပေးသောရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တံဆိပ်ကပ်သည်။ သူတို့ထို့နောက်ပေါင်းသင်း "dweebs" သို့မဟုတ် "nerds" နှင့်အတူမျက်မှန်။"
ကျွန်ုပ်တို့၏ AI စနစ်သည်မျက်နှာများအတုများကိုဖော်ထုတ်သည့်အခါထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ရှိခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောအမှားအယွင်းများနှင့်ပုံစံများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
လူသားများသည်အမှားအယွင်းကင်းသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစနစ်များ၏အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှား။ ဂလတ်စ်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများသည်အလွန်အမင်းဆင်ခြင်တုံတရားရှိခြင်း၊ လေ့လာမှုများအရလူသားများနှင့်ကွန်ပျူတာများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည် လက်ဗွေ or လူ့မျက်နှာများ - လူ တသမတ်တည်း ကွန်ပျူတာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါမှားဖော်ထုတ်ခြင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ dashboard GPS စနစ်၊ ယာဉ်မောင်းများ၏အစောပိုင်းကာလများ၌ နာမည်ကြီးထုတ်ကုန် '' လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာခဲ့သည် ကားများပို့ခြင်းအမှားတစ်ခုအတွက် ရေကန်များ၊ ချောက်ကမ်းများနှင့်သစ်ပင်များထဲသို့ခုန်ချသည်.
ဒီနှိမ့်ချမှုသို့မဟုတ် hubris လား ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတို့၏ဉာဏ်ရည်တွင်တန်ဖိုးနည်းလွန်းသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ထူးချွန်သောအရာများကိုဖန်တီးနိုင်မည်ဟုယူဆပြီး၎င်းကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားပါသလား။
Google နှင့် Bing ၏ algorithms သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကမ္ဘာ့အသိပညာကိုခွဲပေးသည်။ Facebook ၏ newsfeed သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုစစ်ထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပြသရန်လုံလောက်သောအရေးကြီးသည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်။ ကားများတွင် Self- မောင်းနှင်မှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုလက် (မျက်လုံးများ) တွင်ထည့်ခြင်း software ၏။ ဤစနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့မှားယွင်းစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
Artificial Intelligence ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ
ဤအ Algorithms သည်ကမ္ဘာ့အသေအပျောက်အများဆုံးသောလူသတ်သမားကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်သည်
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/21/science/artificial-intelligence-fake-people-faces.html တွင်ပထမဆုံး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ပေါ်လာသည်။
AICreatedအတု လူပုဂၢဳိလ္မ်ားစစ်မှန်သောTimes သတင်းစာYork မြို့
"ငါဘယ်မှာမတ်တပ်ရပ်ဘယ်မှာမသိ!" Francis Ngannou သည်လေးလံသောခွဲစိတ်မှုအခြေအနေကိုအမျက်ထွက်ခဲ့သည်